I peritoneum - ulwelwesi serous ukuthi imigqa ebusweni engaphakathi esiswini ihlanganisa izitho besisu. Ngezinye izikhathi kuba abavusa - futhi udokotela kwenza ukuxilongwa "peritonitis." Izimpawu musa njalo enze kube nokwenzeka ukuba bafinyelele iziphetho mayelana nesimo isifo ekhaya, kodwa kufanele ngokuthi "ambulensi" ngokushesha ngesikhathi izinsolo kancane peritonitis. Ngoba uma lokhu uphethwe bebeletha ingaphezu angu-10 ukuze belashwe odokotela. Uma ungatholi ukwelashwa, cishe sonke siyafa.
Akubalulekile ukudlala esiyingozi umdlalo we "ukuphathwa kazwelonke" isifo "peritonitis." Izimpawu ekuthuthukiseni ekuseni ukuvuvukala zifana ukudla abavamile ubuthi: libhekene isicanucanu nokuhlanza unamandla kakhulu, okuyinto kuhlangene ubuhlungu zibuthuntu noma ezidabukile esiswini, okuyinto okunzima ngokukhethekile lapho wathinta. Nokho, maduzane nje, ubuhlungu bengasenakubekezela neqhubekayo, ezikhulayo ngasiphi ukunyakaza. Isiguli singase sibe Ukugodola nomkhuhlane. Kubonakala sengathi e uketshezi esiswini ageleza. Futhi, kaningi kukhona ukoma ongalawuleki. Ngokuvamile isiguli singenakukwazi ukuchamela noma eziwakhiphayo ingasaphathwa ketshezi kunokujwayelekile. Kwenzeka ukuthi inqubo wamathumbu ukunyakaza ukuze isiguli onjalo cishe kungenakwenzeka.
Kungani kukhona peritonitis? Izimpawu ukuthi siye ohlwini, kuphela abakwazi ukuchaza indawo okuvela kuyo amazwi isifo. We bakutshele mayelana yezimbangela ezivame kakhulu peritonitis.
Okokuqala, lesi sifo isibindi ephelezelwa inqubo isifo sokusha. Kulesi isifo esiswini ketshezi zanqwabelana, okungase ukungena kwamagciwane inqubo ezithathelwanayo. Kwamathambo okubangelwa yi-kubo, futhi ube peritonitis. ngaleyo ndlela Izimpawu ngokuhlanganiswa ezivamile ukulimala kwesibindi, isib, sclera ophuzi.
Okwesibili, lapho inqubo zelashwe peritoneal, lapho le besisu ingaphakathi ipayipi, mhlawumbe okwenza izifo ezitholakala. Ngakho-ke, lezi manipulations engenziwa kuphela izibhedlela, obuphathekayo.
Okwesithathu, avuse peritonitis, izimpawu bayingozi kunjalo, kukhona nezinye usesimweni esibucayi kakhulu. Ezifana igebe isithasiselo, pancreatitis, perforation odongeni isisu, nenyongo sesinye noma wamathumbu.
Peritonitis, ukwelapha okungaba singabakufanelekelayo ukuphathiswa kuphela kudokotela - iyisifo okusongelayo ngqo impilo isiguli ngaso sonke isikhathi. Ngakho-ke, lapho uphawu main - olunzima ubuhlungu nanoma yimuphi ukunyakaza, ehlasela umzimba lonke esiswini, kufanele ngokushesha shayela i-ambulense, kunokuzama ukuthatha ogulayo emtholampilo. Phela, owelapha ngeke akwazi ukukusiza. Lesi sifo kungaba ngokushesha kuvuse sepsis. Lesi simo kunzima kabi ukukwelapha.
Uma isiguli uwile ngokucijile ingcindezi, mhlawumbe lokhu kuwuphawu ukuqala sepsis. Qiniseka niyikhulume le opharetha uphawu othola isimemo esithi "Fast", iqiniso liwukuthi kuleli cala bangase udinga umuntu ukuba aphefumule amaqembu, kunokuba senze ngendlela evamile.
Ngemva baba iyagula esibhedlela, uyobe ngokushesha eyabelwe ukwelapha ngokumpompela uketshezi antibiotic enamandla kakhulu noma ama-ejenti antifungal. Ukuze ukwazi lwegciwane ngqo, udokotela ngeke lubhoboze oketshezini peritoneum. Uma isiguli eba ukwehluleka kwanoma iyiphi yemizimba ke ngokushesha uzoqala ukwelashwa nokugcinwa uhlaka. Isikhathi esining impela zidinga ukwelashwa kuhlinzwa, ikakhulukazi uma peritonitis kubangelwa ukudabuka noma perforation odongeni Esithasiselweni esiswini, ikholoni noma gallbladder. Kulokhu, lo dokotela kuzosusa nezicubu ezibolile, futhi ususe ikakhulukazi engxenyeni abathintekayo we peritoneum. Yiqiniso, ezivuzayo yezimonyo awawaqedi ngalesisimo. Cishe, raspolosuyut lonke esiswini. A isimiso sokukhuculula izofakwa ngemuva kokuhlinzwa, okuyilona elisebenzayo futhi kubuhlungu ngempela. Ngakho-ke kubalulekile ukuba sizame hhayi ukuletha esimweni peritonitis, futhi uma kusolakala - ukuze ngokushesha funa usizo.
Peritonitis, izimpawu zazo sesixoxile, ingavinjelwa ukuqapha isimo zangaphakathi, isibonelo, ungavumeli ukufinyelela degree of isilonda perforation. Ngakho ukudlula njalo nokuhlolwa odokotela bese uthatha izinyathelo ezifanele ngesikhathi esifanele ukuze ekuvimbeleni izifo. Khona-ke akudingeki usola peritonitis, ucingo ephuthumayo "ambulensi."
Uwumnikazi wenkampani wathungela - Izisetshenziswa "enterlak"